Home » Akụkọ banyere ọdụ ụgbọ elu » Trafficgbọ njem ndị njem ka dị ala n'ọdụ ụgbọ elu Frankfurt n'April 2021
Ogologo ibu Frankfurt na-aga n'ihu na-aga n'ihu, mana njem ndị njem na ọdụ ụgbọ elu ndị dị na Group zuru ụwa ọnụ ka dị n'okpuru ọkwa ọrịa na-efe efe.
Onu uzo ugbo elu nke kachasi Germany buru ndi njem 983,839 na Eprel 2021
N'ime oge Jenụwarị-Eprel 2021, FRA jere ozi karịa ndị njem 3.4 nde
Ọdụ ụgbọ elu Fraport niile dị n'ụwa niile dekọtara ọnụ ọgụgụ dị elu na Eprel 2021
Airportgbọ elu FrankfurtỌnụ ọgụgụ ndị njem nke Covid-19 gara n'ihu na-emetụta ọnụ ọgụgụ ndị njem (FRA) n'ọnwa Eprel 2021, mgbe ọnụ ụzọ ụgbọ elu kachasị ukwuu nke Germany jere ozi ngụkọta nke ndị njem 983,839. Nke a na - anọchite anya mmụba pasent 423.1 kwa afọ. Agbanyeghị, ọnụ ọgụgụ a dabere na uru akara ala dị ala nke edere na Eprel 2020, mgbe okporo ụzọ na-akwụsịkarị n'etiti ọrịa na-agbasa ngwa ngwa. E jiri ya tụnyere ọnụọgụ ọrịa na-efe efe na Eprel 2019, FRA debara aha 83.7 pasent nke njem ndị njem maka ọnwa mkpesa. N'ime oge Jenụwarị-Eprel 2021, FRA jere ozi karịa ndị njem 3.4 nde. E jiri ya tụnyere oge agukọtara na afọ abụọ gara aga, nke a na-anọchite mbelata nke 69.3 pasent na 2020 na 83.3 pasent na 2019.
N’aka nke ọzọ, ibu FRA (ibu ikuku na ikuku ikuku) gara n’ihu n’iru ya n’onwa Eprel 2021. Ebe nchekwa zuru ụwa ọnụ Frankfurt nwetakwara ihe ndekọ ọhụụ nke Eprel, na-arị elu site na pasent 42.7 kwa afọ rue afọ 201,661 metric tọn (elu 13.1 pasent na Eprel 2019). Enwetara uto a siri ike n'agbanyeghị ụkọ afọ nke ike ụgbọelu na-enyekarị. Site n'iwepu 15,486 na ọdịda, mmegharị ụgbọ elu rịrị elu site na 137.8 pasent ma e jiri ya tụnyere Eprel 2020. Mkpokọta buru ibu buru ibu (MTOWs) toro site na 78.8 pasent kwa afọ rue ihe ruru 1.2 nde metrik tọn.
Ọdụ ụgbọ elu Fraport niile dị na mba ụwa dekọtara ọnụ ọgụgụ dị elu na Eprel 2021 - na nke mbụ ya kemgbe mmalite nke nsogbu coronavirus. N’elu ọdụ ụgbọ elu ụfọdụ, ọnụ ọgụgụ ndị njem rịrị elu site na ọtụtụ narị pasent, agbanyeghị na mgbadata nke ikuku ụgbọ elu na Eprel 2020. N’agbanyeghi, ọdụ ụgbọelu dị na pọtụfoliyo mba ofesi gara n’ihu na-ada mbubata okporo ụzọ pụtara ìhè ma e jiri ya tụnyere ọrịa na-efe efe Eprel 2019.
Ọdụ ụgbọ elu Ljubljana (LJU) dị na Slovenia jere ozi maka ndị njem 8,751 na Eprel 2021. Njikọ ọnụ na ọdụ ụgbọ elu Brazil nke Fortaleza (FOR) na Porto Alegre (POA) ruru ndị njem 291,990, ebe ọdụ ụgbọ elu Lima nke Peru (LIM) dere ndị njem 544,152 na ọnwa mkpesa .
N’ọdụ ụgbọ elu mpaghara Grik 14, okporo ụzọ rịrị elu ruo ndị njem 162,462 n’April 2021. Tgbọ elu Twin Star nke Burgas (BOJ) und Varna (VAR) n’ụsọ Oké Osimiri Ojii Bulgarian debara aha ndị njem 26,993 n’ozuzu. Ọdụ ụgbọ elu Antalya (AYT) na Turkish Riviera hụrụ ka ndị njem ruru 598,187. Na Russia, ọdụ ụgbọ elu Pulkovo nke St Petersburg nabatara ụfọdụ ndị njem nde 1.2, ebe ihe karịrị nde ndị njem 3.7 gafere site na Xi'an Airport (XIY) na China n'oge Eprel 2021.